‘प्रसाद’ प्रिमियरमा ऋचा निश्चलसँग फोटो खिच्न मात्रै आएकी थिइन् ? « Ramailo छ
‘प्रसाद’ प्रिमियरमा ऋचा निश्चलसँग फोटो खिच्न मात्रै आएकी थिइन् ?
मंगलबार बिग मुभिजमा आयोजित फिल्म ‘प्रसाद’ को प्रिमियरमा थुप्रै फिल्मकर्मी आएका थिए । त्यस मध्येमा नायिका ऋचा शर्माले आफुप्रति मिडियाको ध्यान तान्न सफल भइन् ।
रेड कार्पेट सुरु हुने तीन बजेतिरै बिग मुभिज पुगेकी ऋचा हातमा फूलको गुच्छा लिएर पुगेकी थिइन् । ऋचा रेड कार्पेट सुरुदेखि फिल्म सुरु नहुँदासम्म हलमा बसेकी बसिन् तर फिल्म हेरिनन् । हलमा फिल्म चल्न थालेपछि ऋचा शनिबार हेर्छु भन्दै बाहिरिएकी थिइन् । फिल्म नहेर्ने भए ‘प्रसाद’ प्रिमियरमा ऋचा किन पुगेकी थिइन् त ?
‘ऋचा आइन्, निश्चलसँग फोटो खिचाइन् गइन्’, सञ्चारकर्मी माझ कानेखुसी चल्यो । सञ्चारकर्मीले निश्चल र ऋचालाई एकै फ्रेममा राखेर फोटो खिच्न चाहेपछि प्रोडक्सन म्यानेजर सुरज आचार्यले निश्चलाई ऋचासँग रेड कार्पेटमा फोटो खिच्न बोलाए ।
निश्चल छेउमा उभिंदा ऋचाले विभिन्न मुद्रामा पोज दिएकी थिइन् । निश्चल भने ऋचासँग पोज दिन असहज मानिरहेका थिए । निश्चल छेउ आउँदा ऋचा किन मख्ख भइन् र निश्चलले किन असहज माने ? त्यो उनीहरु नै जानुन् ।
तर एक समय प्रेम चर्चामा समेत रहेका निर्देशक नायिका बिचको भेट मिडियाको लागि मसला हुने नै भयो । निश्चलको निर्देशन रहेका ‘लुट’, ‘टलकजंग भर्सेस टुल्के’ र ‘लुट २’ का ऋचाले अभिनय गरेकी छन् ।